प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक ऋण लिने बताउनुभएको छ । बिबिसी वल्र्डका लागि म्याथ्यु आम्रलीवालालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग भएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । नेपाल बेल्ट एण्ड रोड...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकीकरण ताका भएको गोप्य सहमतिलाई मिडियाले फरक ढङ्गले व्याख्या गरिदिएको भन्दैं गुनासो व्यक्त गर्नुभएको छ । सुनसरी क्षेत्र नं–१ का कार्यकता प्रशिक्षण तथा भेटघाट कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले सहमति जे भए पनि सहमतिमै केपी ओली नै पाँच वर्षसम्म...
काठमाण्डौ । पूर्व घोषणअनुसार विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले छाया सरकार बनाउँदै नेताहरुलाई कार्यविभाजन गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधान बमोजिम छाया सरकार बनाएका हुन् । कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालका अनुसार सरकारको हरेक मन्त्रालयको काममा निगरानी गर्न छायाँ सरकार बनाइएको हो । विभिन्न मन्त्रालय...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी पोलिटब्युरो सदस्यको नाम टुङ्गो लगाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो सदस्यको टुङ्गो लगाएको स्रोतले जनाएको छ । पोलिटब्युरो सदस्यमा पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्य स्वतः पर्ने गरी बनाइएको छ । बैठकले सबै...
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले पूरा हुने र गर्न सकिने खालको सपना देखेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, “सरकारले जागै हुँदा देख्ने सपनाको कुरा गरेको हो । देश बनाउने अठोटको सपना देखेको हो ।” ...
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका लागि आवश्यक संरचना इटहरी र आसपास बन्ने
दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगर बनाउने प्रस्ताव आज पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कूल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये उपस्थित ८६ सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुभयो भने भने विपक्षमा कुनै मत परेन । नेपालको संविधानको धारा ८८(२) र प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ५८क (१७) (पहिलो संशोधनद्वारा...
विराटनगर । विगतमा बन्दहड्तालको खुलेरै विरोध गर्ने र सडक संघर्ष समेत गर्न पछि नपर्ने विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले यसपटक भने सोमबारदेखि जारी अनिश्चितकालीन विराटनगर बन्दको समर्थनमा उत्रिएका छन् । प्रदेश १ को पूर्ण राजधानी विराटनगर हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय दलहरुले सोमबारदेखि विराटनगर बन्द कार्यक्रम आह्वान गरेको थियो...
-सिबी अधिकारी काठमाडौँ । फुट र जुटको राजनीतिबाट अघि बढेका मधेश केन्द्रित विभिन्न छ राजनीतिक शक्ति मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) यतिखेर पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणको सङ्गीन मोडमा उभिएको छ । दुई वर्ष अघि (विसं २०७४ वैशाख ८ गते) पार्टी एकता घोषणा सभामा नेताको गर्जन र पार्टी कार्यकर्ताको जति उत्साह थियो, अहिले निरासातर्फ उन्मुख...
काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारले अघि बढाएको सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी तथा छानविन कार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । महासचिव पौडेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने, संरक्षण गर्ने र राष्ट्रको हितमा...
-कालिका खड्का दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन दुई वर्षका लागि गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीले चार वर्ष दुई महीनामा पनि काम पूरा गर्न सकेनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले दुई वर्षमा उजुरी आह्वान र उजुरी सङ्कलन गर्ने काम गर्यो । सातै प्रदेशका मुकामसमेत खडा गरी उजुरीका बारेमा...
हिन्दु राष्ट्र माग्दा प्रहरीको लाठी, कमल थापासहितका नेता पक्राउ(भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राख्दै राप्रपाले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ । पुतलीसडकस्थित पद्मोदय मोडमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारी राप्रपाले कोणसभा र प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी नेताहरुलाई पक्राउ गरेको हो । राप्रपाका अध्यक्ष...
काठमाडौँ । सरकारले मितव्ययिता अपनाउने रणनीतिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च २८ प्रतिशत कमी आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेसँगै आफ्नो कार्यालयको खर्चमा एक वर्षमा नै २८ प्रतिशत कमी ल्याउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि...
रञ्जु दर्शनाले अख्तियारमा उजुरी हालेपछि बिना मगर आगो, चरित्र हत्याको आरोप
काठमाण्डौ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयलाई जोडेर आफूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रञ्जु दर्शनाले उजुरी गरेपछि खानेपानीमन्त्री बिना मगर आक्रोशित भएकी छिन् । मन्त्री मगरले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आफूविरुद्ध आधारहीन, बिना प्रमाण राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले अख्तियारमा उजुरी दायर...
काठमाडौँ । हामी जनताबाट निर्वाचित भएका हौँ, तर जिल्लाको कार्यक्रममा जाँदा हाम्रो मर्यादाक्रम पूर्वमन्त्रीभन्दा तल राखियो । यसले हामीलाई असजिलो बनाएको छ । यो समस्याको समाधान गर्ने विषयमा सरकारले केही पहल गरेको छैन ? यो भनाइ हो प्रतिनिधिसभाका सदस्य झपट रावलको । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सरकारले...
काठमाण्डौ । सरकारले भारत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतको मर्यादा सरकारको मन्त्रीसरह कायम गरेको छ । भारतका लागि नेपालका आवासीय राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपालका आवासी राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीको मर्यादा मन्त्री सोसरह कायम भएको हो । फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिहीबार सिंहदरबारमा...